Igumbi elilala abantu ababini kwiifama zaseKookal Eco Kwindlu Yodaka - I-Airbnb
Igumbi elilala abantu ababini kwiifama zaseKookal Eco Kwindlu Yodaka
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguVarghese
Igumbi elilala abantu ababini kwiifama zaseKookal Eco
I-Kookal yindawo entle onokuya kuyo ngemoto ukusuka e-Kodaikanal, e-Hill of Hills. Ukuba uyakwazi ukoyisa ukuzama ukuma kwiindawo ezinomtsalane ezibonisa indlela, ungagubungela umgama ongaphezu kweyure ukusuka eKodaikanal. Yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo bakhangele iindawo zokuhlala ezingekho semgangathweni.
Igumbi Labantu Ababini Kwindlu Yodaka likwi-acre eziyi-5 elijongene namahlathi aseShola kunye nechibi leKookal.
Igumbi Labantu Ababini linokuhlala abantu abayi-2. (Kukho nendlu esemaphandleni enokwamkela abantu abayi-5 edweliswe ecaleni. Zombini zidibene zinokuhlala abantu abayi-7.)
Isibhakabhaka esimnyama siyamangalisa eKookal kwaye siza kuba yinto ethandwa ziinkwenkwezi.
Ngokuqhelekileyo iintsuku zenyanga ezipheleleyo ziyakhanya kwaye zenza kube mnandi.
Ungajonga ikhalenda ye-Moonrise, i-Moonset kunye ne-Montreal ye-Kodaikanal kwi-intanethi ukuze wazi oku kungasentla.
Ukungena kweendwendwe Zive ukhululekile ukufikelela
kuzo zonke iindawo zendlu eziquka indawo yokukhempisha kunye ne-gazebo. Indawo yokoja ingalungiswa ngesicelo ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
I-Kookal ayinazo izikhululo zegesi. Ngoko ungalibali ukugcwalisa kwakhona ipetroli ngaphambi kokuba uphume eKodaikanal. Akukho venkile yotywala.
‘I-sangam‘ entle yeenduli eziqengqileyo, intlambo entle kunye nomzimba wamanzi!
I-Kookal yeyona ndawo inkulu yamahlathi anqabileyo aseShola kuwo onke amahlathi asePalani Hills ekwiNtshona yeGhats. Kungavuyisa ukuqaphela ukuba iWestern Ghats yenye yeendawo ezimbini eziphilayo eIndiya, kweziyi-35 emhlabeni wonke. I-Kookal likhaya leentlobo zee-butterflies kunye neentaka ezininzi ezingaqhelekanga ezinjengeehobe zamaplanga, i-Nilgiri Imperit kunye neentlobo eziyi-15 zee-dabchicks ngaphandle kwee-bison (i-Indian Gaur), ii-mouse deers, ii-barking deers, izinja zasendle, iigusha kunye nee-tigers.
Kukho iingxangxasi ezintathu ezintle.
Omnye unokufikelela kwiimitha ezingamakhulu ambalwa zokunyuka intaba.
Iingxangxasi zaseThoothoor zintle gqitha ibe ziyathandeka. Ingafikelelwa malunga neyure eyi-1/1 yokunyuka intaba usiya entlanjeni. Izikhokelo ziyafumaneka ukuba zihambe neendwendwe. Iindwendwe zinokulungiselela ukuba amahashe abuyele umva.
Enye engaphakathi kwihlathi laseKookal enikezela ngamanzi kuyo yonke ilali unyaka wonke ifuna imvume yesebe lamahlathi ekunzima ukuyifumana.
I-Central negusha neWool Research Institute (CSWRI) eMannavanur yimizuzu nje embalwa xa usuka eKookal. Le ndawo yenye yeendawo zokugqibela eziphakamileyo eziphakamileyo ezishiyekileyo kwiiPalani Hills, ezisasazeka ngaphezu kwee-acre eziyi-1,340. Kukho iindawo ezintle apho unokubona kakuhle ifama yeegusha. Iziko lizalisa iigusha kunye neegusha zoboya kunye nenyama.
Indawo yeMannavanur Ecotourism isecaleni kwefama yeegusha. Ukukhwela ihashe echibini yenye yezinto eziphambili kule ndawo.
Ukuqhuba iikhilomitha eziyi-4 ukusuka eKookal kuza kukusa kwilali ekufutshane ekuthiwa yiGundupatti, apho unokutyelela khona ukulima iintyatyambo kunye neefama zemifuno ezenziwe ngaphakathi kwizindlu eziphakamileyo.
Imiqolomba yeKookal (ekwabizwa ngokuba yiKukkal) ziindawo zamatye zakudala ezibonisa imvelaphi yePalaiyar yokuqala (ethetha "ezindala") izizwe ezazikade zinxiba iimpahla zamagqabi. Imiqolomba ixhonywe phezu kweentlobo ezahlukeneyo zamatye abizwa ngokuba yi-charconite kunye ne-granulite. Kude kube phakathi kweminyaka yoo-1980, iintsapho ezingaphezu kwe-30 zihlala kumantla eenduli, apho kukho itempile encinci. Iindawo ezikufutshane netempile zenza kube mnandi ukubona iintaba namaxethuka ayi-360.
Umbuki zindwendwe ngu- Varghese
Usapho olugcinayo luhlala kule ndawo ukuze luhlangabezane neemfuno zakho. Nceda usazise malunga nokutya okukhethayo kwangaphambili ukuze sikwazi ukucwangcisa ukutya kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kookal